Maxamed Saalax, Mane iyo Xiddigaha kale ee MUSLIMIINTA ah Dartood oo dib loogu dhigay African Cup of Nations….(Ogoow Sababta Cajiibka ah ee ka dambeysa) – Gool FM
Henrikh Mkhitaryan oo weerar ku qaaday tababare Unai Emery
“Messi wax badan ayuu iga caawiyay kobcinta shaqsiyadeyda” – xiddig ka tirsan Barcelona
Borussia Dortmund oo go’aamisay qiimaha ay kaga iibineyso Jadon Sancho kooxaha Real Madrid iyo Liverpool
Gerard Piqué oo si cad u sheegay in Barcelona aysan wali gaarin heerka loo baahnaa
Tababare Tite oo walaac ka muujiyay Messi, inkastoo kulanka caawa dhex mari doono Brazil iyo Argantina uu yahay mid saaxiibtinimo
Pele oo tartan adag la galay Cristiano Ronaldo, kaddib saddexleydii uu xalay u dhaliyay xulkiisa qaranka Portugal
“Madrid waa gurigeyga labaad” – Gerard Piqué
Kooxda Manchester City oo doonaysa inay safkeeda ku xoojiso daafac ay ku raad joogtay Manchester United
Atletico Madrid oo ku rajo weyn inay 34 milyan oo gini bisha Janaayo ku dhammaystiri doonto saxiixa xiddig ka tirsan Kooxda Barcelona
Wakiilka Daafaca Arsenal ee Hector Bellerin oo xaqiijiyey xiisaha xiddigan uga imaanaya dalka Talyaaniga
Maxamed Saalax, Mane iyo Xiddigaha kale ee MUSLIMIINTA ah Dartood oo dib loogu dhigay African Cup of Nations….(Ogoow Sababta Cajiibka ah ee ka dambeysa)
Byare January 28, 2019
(Europe) 28 Jan 2019. Koobka Qaramada Afrika ayaa dib loo dhigay lix Maalmood sababo la xiriira Ciyaartoyda Muslmiinta ah dartooda si ay u helaan waqti ay ku nastaan kaddib bisha Barakeysan ee Ramadaan.
Sida caadiga ah shaqsi kasta oo Muslim ah looma ogola inuu wax biyo ama cunno ah qaato maalinkii oo dhan 30-ka beri ee bisha Ramadaan taa oo adkeynaysa in ciyaartoyda Muslimiinta ah ay qaataan Tababar.
Afrikan Cup of Nations ayay ahayd inuu bilowdo 15-ka bisha June balse iminka dib ayaa loo dhigay oo wuxuu furmi doonaa 21-ka June si ay Ciyaartoyda Muslimiinta ah u helaan nasiino Usbuuc ah kaddib bisha Ramadaan.
Bisha Barakeysan ee Ramadaan ayaa dhammaan doonta 4-ta June taa oo ka dhigan in Ciyaartoydii Soomaneyd ay heli doonaan Usbuuc ay ku soo kabtaan iskuna diyariyaan.
Tartanka Koobka Qaramada Afrika ayaa waxaa ka qeyb gali doona xiddigo waa wayn oo Muslimiin ah sida Maxamed Saalax iyo Sadio Mane.
“Ma niyad jabi doono la'aanta Neymar Jr”
Ferguson oo doortay kan fiican Diego Maradona iyo kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi